सहिद र बलिदानी मूल्य — Newskoseli
खेम थपलियाकाठमाडौं, १४ फागुन ।
पूर्वी नेपालको बारा, पर्सा, रौतहटमा २०११/०१२ तिर सशक्त किसान आन्दोलनका क्रममा मुखलाल महतोदेखि पञ्चायती निरङ्कुशताविरोधी आन्दोलनमा मधेसका कामेश्वर र कुशेश्वर यादवले पनि नेपाली धर्तीमा आफ्नो अमूल्य रगत बगाए । पञ्चायती शासनविरोधी काङ्ग्रेसले सुरु गरेको हतियारबद्घ सशस्त्र सङ्घर्षमा ओखलढुङ्गाको टिमुरबोटेमा क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापादेखि २०२८/०२९ सालको झापा सशस्त्र विद्रोहको क्रममा नेत्र घिमिरे, वीरेन राजवंशी, कृष्ण कुइँकेल, नारायण श्रेष्ठ र रामनाथ दाहालले पनि रगत बगाए । क्रान्तिकारी नेता ऋषि देवकोटा ‘आजाद’ देखि सम्झना दाहाल, टङ्क भुसाल, सात बर्से बालक अनिश शाक्यलाई पनि त्रूmर शासकले बाँकी नराखे पनि जनताले बलिदानीपूर्ण प्रतिरोध जारी राखेका छन् ।
जनयुद्धका क्रममा यो बलिदानीपूर्ण प्रतिरोध उत्कर्षमा पुग्यो । सामन्तवाद, साम्राज्यवादविरुद्ध सङ्घर्ष वैज्ञानिक समाजवाद हु“दै साम्यवादसम्म जाने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ अघि बढेको जनयुद्धमा बलिदानको अद्वितीय पिरमीड कायम भयो । ११ बर्से दिलबहादुर रम्तेलदेखि माओवादीका ६ जना केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित जनताको महान् उत्सव जनयुद्धको क्रममा सहादत प्राप्त गरे । तत्कालीन फासिस्ट सरकारका बर्बर आतङ्क र हत्याकाण्डले कयौंले आफ्नो सर्वस्व बलिदान दिए, अङ्गभङ्ग भए र अनगिन्ती पीडा पनि व्यहोरे; जसको शाब्दिक वर्णन असम्भव छ । नयाँ यथार्थको जगमा नेपालको इतिहासमा विविध कालखण्डमा भएका वर्गीय र न्यायपूर्ण युद्धका क्रममा उच्च सहादत प्राप्त गर्ने सहिदहरूको सम्झना र सम्मानमा हरेक वर्ष (फागुन १४–२१) बलिदान सप्ताह मनाउने परम्परा रहिआएको छ । यतिखेर न्यायपूर्ण युद्धका महान् सहिदहरूको सम्झना र सम्मानमा मनाउ‘दै आएको सहिद सप्ताह निरन्तर क्रान्ति र लक्ष्यभेदनार्थ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न आवश्यक छ ।
महान् सहिदहरूको त्याग, बलिदान, वीरता तथा शौर्यलाई आत्मसात गर्दै कम्युनिस्ट/सर्वहारावर्गको आमूल परिवर्तन र मुक्तिका खातिर प्रेरणास्वरूप सुरु गरिएका सप्ताहहरूले साँच्चै क्रान्तिको कडीलाई नयाँ ढङ्गले जोड्ने मद्दत पुगेको छ । सुखानीको वीरता अनि जनयुद्धभित्रको अदम्य साहसलाई बलिदान सप्ताहले लिपिबद्ध गरेको छ । यसले जनयुद्धका प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेल मारिएको दिन फागनु १४ गते र झापा आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त झापाका अग्रणी योद्धालाई मारिएको फागुन २१ गतेको सुखानी हत्याकाण्डको दिनलाई जोडेर सहिद सप्ताहका रूपमा मनाउँदै आएको ऐतिहासिकतालाई जोडेको छ । बलिदान दिवसभित्र राणाशासनविरुद्ध विद्रोह गरेका गोरखाका प्रथम सहिद लखन थापाको बलिदानलाई समेत जोडिएको छ ।
नेपालमा विगतदेखि समकालीन एकीकृत जनक्रान्तिसम्म भएका क्रान्ति, सङ्घर्ष र बलिदानको कडी तथा महत्वपूर्ण घटनाहरूलाई जोड्ने आमूल परिवर्तन, अग्रगमन, जनताको मुक्ति र परिवर्तनप्रतिको चाहनालाई आत्मसात गर्नका लागि बलिदान दिवस सहिदी मूल्य र तिनका सपना पूरा गर्न महत्वपूर्ण छ । देश र जनताका लागि लडेर सहिद हुनुभएका महान् सहदिहरूका स्मरण, सम्झना, सम्मानस्वरूप आयोजित सहिद सप्ताह (फागुन १४–२१) महान् सहिदहरूको स्मरण र सम्झना गर्ने महान् सन्दर्भ हो । यो देश र जनताका मुक्तिका लागि क्रान्तिकारी धारा दरोसित पक्रन्छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्ने बेला सन्दर्भ पनि हो । जनयुद्धलाई झापा विद्रोहकै निरन्तरता र त्यसको कडीको रूपमा व्याख्या गर्दै दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘झापा विद्रोह नेपाली क्रान्तिको एउटा कोशेढुङ्गा हो, त्यसलाई हामीले जनयुद्धको माध्यमबाट त्यसका लक्ष्य र उद्देश्यहरूलाई जोडेर नेपाली क्रान्तिलाई विजयको सन्निकट पुर्‍याएका छौं ।
सहिदका सपना पूरा भएका छैनन् । हाम्रा अगाडि महान् सहिदहरूका रगतले लेखेको इतिहास, उनका जीवनोत्सर्ग, आस्था, बलिदानका सपना र विचारको निष्ठाले औंला ठड्याएर आज पनि सचेतना दिइरहेको छ कि नयाँ नेपाल निर्माणको सपना नभुल्नू, सर्वहारावर्गको राज्यव्यवस्था स्थापनाको सङ्कल्प नछोड्नू, सामनता, न्याय र स्वतन्त्रताको समाज स्थापना गर्ने दृढ अठोट नबिर्सनू, सामन्ती र साम्रान्वादी उत्पीडन, दमन र शोषण विरुद्ध सधैं जागिरहने निष्ठा र समर्पणलाई नछोड्नू आदि । तिनले हामीलाई प्रतिरोध संस्कृति, त्याग, बलिदानको संस्कृति र वर्गसङ्घर्षको संस्कुतिलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सन्देश दिइरहेका छन् । शौर्य, साहस र वीरताको १० बर्से जनयुद्ध वर्गसंस्कृतिको स्मरण गराइरहेछन् ।
मुक्तिका लागि क्रान्ति–बेदीमा आत्माहुति चढाउन तयार रहनु आजको आवश्यकता हो । विगतमा शासकका बर्बर र अमानवीय तानाशाही सत्ताले क्रूरताको पीरामीड खडा ग¥यो । तिनले वर्गीय विचार र आस्थामा धावा बोले तर जनताले त्यसको सशक्त प्रतिरोध गरे । त्यो निरन्तर सङ्घर्षको सन्देश पनि थियो । त्याग, निष्ठा र समर्पणको निरन्तर आत्मसातीकरणबिना हामीले अग्रगमनको यात्रा गर्न सक्तैनौं । वर्गमुक्तिको यात्रामा वर्गचेतना, वर्गप्रेम र वर्गघृणालाई साम्यवादको युगसम्म जीवित राख्ने र वर्गसङ्घर्षलाई लगातार अघि बढाउँदै सर्वहारावर्गलाई अन्तिम विजय नहुँदासम्म सङ्घर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धतालाई आजको एकीकृत जनक्रान्तिमा जोड्न आवश्यक छ ।
महान् सहिद ज्वारकी आमा असोजी पुन भन्नुहुन्छ, “छोराको धेरै सम्झना आउँछ, छोराका साथीहरू देख्दा सबैलाई छोराजस्तै मान्छु । देश र जनताका लागि हाम्रो छोरा गयो तर अहिले खै के भयो, के भयो ? जनताका लागि लडेको भन्थ्यो, जनताले के पायो कि पाएन, थाहा छैन । सहिद परिवारलाई हेरेको छ कि छैन, थाहा नै पाएको छैन । हामी त डाँडामाथिको जूनजस्तो भयो, जनतालाई राम्रो होस् । सहिद ज्वारकी जीवनसङ्गिनी सम्झना घर्ती भन्नुहुन्छ, “हामी सहिद परिवार भएको हुनाले गर्वको अनुभूति गर्छौं । उहाँले देश र जनताका निम्ति बलिदान दिनुभएको हो । सहिदहरूलाई माओवादी र राज्यले राष्ट्रको निधिका रूपमा लिनुपर्दछ । यसको सँगसँगै राज्यले सहिद परिवारलाई जसले राष्ट्र र जनताका लागि बलिदान दियो, त्यसलाई कसरी हेर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा व्यावहारिक नीतिहरू बनाएर सहिद परिवारहरूको जीवनस्तरलाई माथि उठाउनुपर्छ ।
सहिदहरूको सपना पूरा गर्नका लागि आफ्नो आधारभूत लक्ष्यबाट दायाँबायाँ गर्नुहुँदैन । उहाँ ३३ वटा सफल कारबाहीहरूमा सहभागी हुनुभयो । उहाँको सबभन्दा सफल कारबाही कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीको सिद्धरा हो । उहाँको वीरता, बलिदान र पार्टीको लागि त्याग, समर्पणको मूल्याङ्कन गरेर सहिद परिवारको हेरविचार गर्नुपर्दछ । जनयुद्धमा पार्टी/क्रान्तिले होनाहार योद्धा, कमान्डरहरू जन्मायो, गुमायो । महान् योद्धा, कमान्डरहरूको बलिदान त्याग, समर्पण र लक्ष्यबाट विचलित हुनुहुँदैन । जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि अगाडि बढ्नुपर्दछ । नेत्र घिमिरेका भाइ धर्म घिमिरे भन्नुहुन्छ, “दाजुलगायत अरू पाँचै जनालाई तत्कालीन राज्यले दर्जनौं मुद्दा लगाएको थियो ।
वर्ग मेटाउने र वैज्ञानिक समाजवाद–साम्यवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ जनताले आफ्नो जीवनाहुति दिए । उनीहरू जनमुक्ति र सुन्दर सपना साकार पार्न दीपशिखा बनेका छन् । उत्पीडित जनताको मुक्तिका लागि जनताले कोरेको बलिदानको इतिहास अनुपम छ । न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको यो लामो अभियानमा लखन थापादेखि दिलबहादुर रम्तेल हु“दै हजारौं सर्वोत्तम छोराछोरीले दिएको बलिदान सामान्य छैन ।
केही नेताले धोका दिन सक्छन् तर पनि क्रान्तिको प्रवाह रोकिँदैन । क्रान्तिको सामूहिकीकृत उर्ध्वगामी दिशा पक्रनु आजको आवश्यकता हो । क्रान्तिको उर्ध्वगामितामा सहिदीमूल्य हुन्छ । सहिद मुक्ति, क्रान्ति, प्रगति, न्याय, समानता, र अग्रगामी परिवर्तनको समष्टि हो । यो हरेक गद्दारी, आत्मसमर्पण, बेइमानी र विसर्जनविरुद्धको खबरदारी पनि हो । यो त्याग, बलिदान, समर्पण, उदात्तता, सुन्दर भविष्यको प्रतिबिम्बन पनि हो । आज सहिदहरू हामीलाई औंला ठड्याएर भनिरहेका छन्– वैज्ञानिक समाजवाद–साम्यवाद स्थापनाको सपना नभुल्नू, सर्वहारावर्ग/कम्युनिस्टको राज्यव्यवस्था स्थापनाको सङ्कल्प नछोड्नू, समानता, न्याय र स्वतन्त्रताको समाज स्थापना गर्ने दृढ अठोट नबिर्सनू, सामन्तवादी र साम्राज्यवादी उत्पीडन, दमन र शोषणका विरुद्ध सधैं जागिरहने निष्ठा र समर्पणलाई नछोड्नू ! सहिद मुक्ति र स्वतन्त्रताको कहिल्यै ननिभ्ने ज्योतिपुञ्ज हो । त्यसैले सहिदसँग जीवनको स्पन्दन छ, सुन्दरता छ, गन्तव्य छ अनि परिवर्तनको अविरल धारा छ । मानवमुक्ति, उन्नति र प्रगतिका मूल्य, विचार र आदर्शहरूमा सहिदहरू बाँचेका हुन्छन् ।